Monday November 23, 2020 - 11:28:48 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dowladda Xabashida Itoobiya ayaa guulo waaweyn ka sheeganaysa dirirta waxayna soo saaraysaa hanjabaadyo ka dhan ah maleeshiyaadka qowmiyadda Tigreega.
Ilo wareedyo ka tirsan Milatariga Itoobiya ayaa sheegay in ciidanka Federaalka Xabashida ay xoojinayaan horu socodkooda ay ku kulaalayaan magaalada Maqalla ee xarunta gobolka Tigray.
R/wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa maleeshiyaadka Tigreega uqabtay 72 saacadood gudahood in ay iskusoo dhiibaan ayna wareejiyaan magaalada Maqalle haddii sidaas ay yeeli waayaana tallaab adag laga qaadi doono.
"Waxaan idinkugu baaqayaa inaad isku soo dhiibtaan muddo 72 saacadood gudahood ah waxaad ku jirtaan marxalad aan dib looga laaban karin," ayuu Abiy oo qoraal kooban ku faafiyay bartiisa Twitterka.
Goor sii horeysay afhayeen u hadlay milatariga ayaa sheegay in ciidamada Itoobiya ay qorsheynayaan in ay ku hareereeyaan caasimada gobolka taangiyo ayna dhici karto in ay madaafiic ku duqeeyaan magaalada si loosoo afjaro dagaalka sedax isbuuc jirsaday ee ka socda waqooyiga wadankaasi.
Magaalooyin istiraatiiji ahaa ayaa lagasoo qabsaday jabhadda TPLF kadib duqeymo xagga cirka ah oo lagu burburiyay saldhigyadii ay ku sugnaayeen maleeshiyaadkooda.
Warbaahintu waxay sheegaysaa in 80% dhulka gobolka Tigray ay cagta soo mariyeen ciidamada xabashida balse waxay wajahayaan dagaal jabhadays ah oo aad udhib badan.
Dhinaca kale Jabhadda Xoreynta Shacbiga ee Tigreega oo diidan in ay soo afjarto xukunkeeda dhulka Woqooyiga ayaa sheegtay in ciidamadeedu ay qodanayaan dhufeysyo islamarkaana ay si adag u wajahayaan ciidamada dowladda Itoobiya.
Afhayeen u hadlay Tigreega ayaa ku tilmaamay dib u gurashada ciidamadooda ee jiidda hore in ay tahay xeelad dagaal oo looga baxayo magaalooyinka si loo badbaadiyo nolosha dagaalyahannada iyo ciidanka shacabka intaba, wuxuu carabaabay in ciidamadoodu ay magaalooyinka soo faarujiyeen si ciidamada federaaliga ah ay ugusoo jiidaan dagaal jabhadays aad u adag.
Waxa loogu yeero beesha caalamka ayaa wali soo saaraya baaqyo ku wajahan dhinacyada hardamaya balse xukuumadda addis ababa oo ay ka go'antahay in ay soo afjarto maamulka Tigreega ayaa diiddan wadahadal taas bedelkeedna isdhiibid ayay ugu baaqaysaa saraakiisha ismaamul goboleedka.
Kumanaan kun oo askari iyo maleeshiyaad ah ayaa larumeysanyahay in ay ku dhinteen isdilka udhaxeeya xabashida kaasi oo larumeysanyahay in uu sabab unoqon doono dagaal sokeeye oo wadankaasi ku dhaxmara qowmiyadaha kala diimaha iyo siyaasadda ah.
hoggaamiyaha cusub ee dowladda Mareykanka ayaa isku diyaarinaya in uu soo dhiso golihiisa xukuumadda xilli uu cadaadis kala kulmayo donald Trump oo waqtigiisu sii idlaanayo.